Manchester City oo guul Sahlan ka gaartay Chelsea Finaalka Koobka FA Community Shield+SAWIRRO – Gool FM
CR Shariif August 5, 2018
( FA Community Shield ) 05 Agoosto 2018. Naadiga hantay horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa si raaxo ah guul kaga gaartay Chelsea Finalka FA Community Shield kaddib cayaar ku dhamaatay 2-0
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala nastay 1-0 oo ay hogaanka dheesha ku qabatay kooxda Manchester city, waxaana goolka daah furkaa dhaliyay Sergio Aguero oo baas fiican ka helay Bernardo Silva isagoona kubbad jooge hoose ah shabaqa dul dhigay daqiiqadii 13-aad.
Chelsea ayaa dhankeeda kubbad qurux badan soo bandhigay wallow ay yaraayeen fursadaha halista ah oo ku bartilmaameed sadeen goolka City.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe waxaa markale ku dhawaatay gool kooxda City markii uu kubbad birta goolka Chelsea ku garaacay dhaliyaha goolka hore ee Aguero.
Cayaarta oo socota qeybta dambe daqiiqadii 58-aad City ayaa sii dheereysatay hogaanka waxaan goolkiisii labaad ee dheesha dhaliyay Aguero. Oo markale caawinaad ka helay Bernardo Silva.
Weerarka kooxda City oo dhan kasta ahaa ayaa saxiixooda cusub ee Riyad Mahrez wuxuu ku sigtay inuu gool seddaxaad u dhaliyo kooxdiisa kaddib darbad xoogan uu banaanka goolka mariyay.
Goolhayahe Chelsea Wilfredo Caballero ayaa ka diiday Aguero Hat-trick markii uu si qurux badan kaga badbaadiyay gool markii uu diib fiican ka helay daafaca Kyle Walker
Ma aheen mid kala joogsi ah weerarka City waxaa fursad gool noqon kartay shabaqa Chelsea ku garaacay da’yarka badalka kusoo galay ee Brahim Diaz.
Kooxda Chelsea ayaa ku guuldareystay inay sameyso wax ka kabadn hal shuud oo goolkaa marka lala barbardhigo City oo shabaqa Blues ku tuurtay todabad shuud, waxaana furada ugu wacneed ka badbaadiyay goolhaye Bravo markii uu diib halis ahaa uu soo dhigay irida goolka laacibka Barkley.
Guusha Man City ayay ka dhigan tahay kooxdii ugu horreeysay ee ku guuleysata Koobka Community Shield taasoo xagaagii hore ku guuleysatay horyaalka Premier League tan iyo Manchester united kal cayaareedkii 2013.
Kooxaha Man United iyo Chelsea oo la filayo inay sameeyaan heshiis ay isku dhaafsanayaan laba xidig muhiim ah